Ny Tenin'Andriamanitra manetsika ny finoana
Eo amin'ny fiainantsika isika kristiana matetika dia tafalatsaka ao anatin'ny tsy fahatokiana an'Andriamanitra, ketraka, reraka sy matahotra mandray fanampahan-kevitra, matahotra ny tsy hahomby ary matahotra ny ho faty mihintsy isika. Inona ny anton'izany?
Satria isika tsy mandeha amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra satria isika dia tsy olon'ny finoana.
Inona ny ilaina amin'ny fahatokiana ?
- Mitaky finoana izany
Tianao ve ianao mba ho lasa olon'ny finoana izay avy amin'Andriamanitra?
Izany hoe olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny finoana dia azo lazaina hoe : ny Tenin'Andriamanitra no "activena"
Romana 10:17 "Koa ny finoana dia avy amin’ ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ ny tenin’ i Kristy"
Izany hoe ny finoana dia avy amin'ny fihainoana ny toriteny, ary ny toriteny izay henoina dia avy amin'ilay teny mikasika an'i Kristy
Raha ohatra isika mamaky Tenin'Andriamanitra ka isakin'ny avy mamaky isika ka miteny hoe "ho ataoko izany" ary amin'izay fotoana izay dia ny finoantsika lasa no"activene"n ilay Tenin'Andriamanitra
Inona ny fahasamihafana ny amin'ny baiboly sy ny boky hafa izay vakiantsika manampy antsika amin'ny fahalalana sy fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra.
Tamin'ny izaho tsy mbola tena niditra tamin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny boky ohatrany ny baiboliko taloha dia bokin'ny "dal karnejy" ho anareo izay "comment se faire des amis pour réussir dans la vie"
Fa rehefa tonga kosa ilay tenin'Andriamanitra dia hitako hoe lavitra be ny zavatra azo avy amin'ilay Tenin'Andriamanitra sy io boky io.
Inona marina ny maha samy hafa ny baiboly sy ireny boky hafa manampy antsika ireny?
Ny boky hafa ankoatran'ny baiboly indraindray dia tena manome fanampiana sy miteny zavatra marina nefa izy ireny dia tsy manome antsika ny hery hanantanterahana amin'ny fahamarinana hitantsika ireny.
Manome antsika fotsiny ohatra hoe : "tokony tsy hijanona tsy hatahotra isika", na koa "tokony hajanontsika ny fahazaran-dratsintsika fa tsy mety" fanampiana izany fa tsy hanome anao ny hery mba hitazona na hanampahanao hevitra hahatanteraka izany.
Satria tsy boky velona ireny boky ireny. Ny baiboly ihany no lazaina fa fiainana izany hoe misy aina sy fahavelomana ao anatiny
Ny Tenin'Andriamanitra dia tsy miteny amintsika fotsiny hoe inona ny atao fa manome antsika ny hery hanantanterahana azy.
Rehefa avy eo dia mampitombo ny finoanatsika eo ampanantanterahana izany.
Misy fampianarana izay hoe : Rehefa mahita Tenin'Andriamanitra ianao izay tena nahakasika ny fonao ka andraisanao fanampahan-kevitra ny hanantanteraka azy dia izao ny zavatra tsapako, ny segodra ao aorinan'iny fanampahan-kevitra iny dia misy hery manampy anao sy mivoaka amin'ny alalan'izany Tenin'Andriamanitra izany hahatanteraka izany. Efa nihainako imbetsaka mihintsy izany amin'ny fanantanterahana ny Tenin'Andriamanitra ary rehefa avy eo ilay finoana dia miakatra eo ampanantanterahana ilay Teny na baikon'Andriamanitra izany.
Efa nolazaiko teo amin'ny fampianarana teo aloha fa amananrivony ny fampanantenana ao anatin'ny baiboly ary Andriamanitra dia miasa, mihetsika, manantanteraka ny anjarany ao anatin'izany fa isika kosa dia ny mankato Azy sy manaiky izany Teniny izany, izany no miteraka an'ilay fahatokiana ao anatintsika araka ilay nambara tamintsika teo.
Rehefa manomboka manaiky ny Tenin'Andriamanitra isika ary hanantanteraka izany dia misy hery hanampy antsika amin'izany ary mametraka ny fahatokiana ao anatintsika.
Izaho dia manaiky sy mahafantatra ary nahita tamin'ny fiainako fa rehefa manantanteraka ny Tenin'Andriamanitra izay angatahan'Andriamanitra amiko dia mampanantena valiny izy. (mety ho eny na tsia na andraso mety ho valiny hafa koa)
Fa amin'ny fotoana izay hanantanterahanao ny Tenin'Andriamanitra dia hamaly anao Izy amin'ny fotoanany.
Misy tantara ao amin'ny baiboly iray ity hanaovana sary amin'izay fanazavako izay :
"Ny zanak'Israely rehefa nomen'Andriamanitra toky fa ho arovan'Andriamanitra sy ataony ho mpandresy amin'izay fahavalo rehetra manodidina azy sy miady aminy..."
Vakio ny Eksodosy 23:1-33
Ny Eksodosy 23:20 "Indro, Izaho maniraka Anjely eo alohanao hiaro anao any an-dàlana sy hitondra anao ho any amin’ ny fitoerana izay namboariko"
Nanome toky azy ireo Andriamanitra fa hiaro azy ireo Izy sy hametraka sy hamponina azy ireo soa amantsara any amin'ny tany Kanana.
Fa ao amin'ny Eksodosy 23:29-30 " Tsy handroaka azy eo alohanao amin'ny taona iray Aho, fandrao ho lao ny tany, ka hihamaro hamely anao ny bibi-dia. Tsikelikely no handroahako azy eo alohanao mandra-pahamaronao ka handova ny tany"
Andriamanitra izany nampanantena ny zanak'Israely fa hiaro azy fa nanome teny Izy hoe tsy androaka an'ireo fahavalo amin'ny taona iray Izy fa ho ataony tsikelikely izany fandroana izany satria ny zanak'Israely tamin'ny izany dia kely dia kely tokoa ka raha ohatra izany ireo fahavalo rehetra ho ringanin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fohy dia tsy hahahenika ny tany akory ny zanak'Israely ka manjary ilay bibidia indray hoy Izy no hamely azy ireo dia nomen'Andriamanitra fomba fiady izy tokony noraisin'izy ireo : finoana.
Inona ny zavatra nitranga?
Rehefa hiampita ny ranon'ny Jordana izy ireo mba haka ny tany izay efa nampanantenan'Andriamanitra azy dia tonga tao antsain'izy ireo fa tsy afaka hanantanteraka izany izy, ka roa ihany no tafiditra tany amin'ny tany Kanana fany ambiny dia noringanin'Andriamanitra avokoa satria nihevitra ny zanak'Israely fa ilay teny nomen'Andriamanitra azy dia tahaka ny teny tsy manana hery.
Izay ilay tiana apetraka eto hoe " amin'nny fotoana izay hanekenao fa hanantanteraka ny Tenin'Andriamanitra ianao dia amin'ny segodra ao aorinan'izay dia hisy hery hahafahanao manantanteraka ny teniny eo amin'ny fiainanao.
Ireto zanak'Israely ireto dia tsy nametraka izany finoana izany, Andriamanitra dia nametra "processus" hoe tsikelikely no hanaovako azy, fa izy ireo hatramin'ny voalohany dia efa tsy nanampaharetana, tamin'i Mosesy nihona tamin'Andriamanitra tany antendrombohitra dia niteny tamin'i Arona izy ireo tsy hiandry an'i Mosesy fa hanamboatra andriamanitra sampy.
Izay ilay tiana apetraka eto hoe amin'nny fotoana izay hanekenao fa hanantanteraka ny Tenin'Andriamanitra ianao dia amin'ny segodra ao aorinan'izay dia hisy hery hahafahanao manantanteraka ny teniny eo amin'ny fiainanao ary ampiakatra ny finoanao izany.
Io tantaran'ny zanak'Israely io dia tantara lava be raha ho resahina ny finoana fa ny fampianarana eto dia fomba hisintonana ny saintsika amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fomba fanompoantsika sy ny fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'izao vanin'andro farany iainantsika izao.
Rehefa mamaky Tenin'Andriamanitra izany isika dia tokony hiteraka fahatokiana, ao anatintsika foana ny fiafaran'ny Tenin'Andriamanitra raha toa isika ka hanantanteraka azy.
Ary voalazako teo aloha koa hoe ny finoana dia Tenin'Andriamanitra "activena" izany hoe raha ohatra izany isika ka tsy manana Tenin'Andriamanitra mihintsy ao anatin'ny andro anankiray dia efa naman'ny olona tsy ao anatin'ny finoana koa isika. Izany no tena mba ampirisihina antsika mba tsy hisangisangy rehefa mifoha maraina hanao ny asantsika kanefa tsy nanana Tenin'Andriamanitra satria raha ny fampianarana nomeko antsika dia hoe ny finoana ny Tenin'Andriamanitra "activena" ary izany no mahatonga antsika rehefa handray fanampahan-kevitra na misy zavatra atao na any amin'ny toeram-piasana na ao antokan-trano na aiza na aiza dia tonga ao anantitsika ny fisalasalana, ny fahatahorana, ny tsy finoana ary izay dia miteraka ny tsy fahombiazana eo amin'ny fiainantsika andavan'andro.
Noho izany dia averina amintsika fa mila mankato sy manantanteraka ary manaiky ny Tenin'Andriamanitra isika mba hahatonga antsika ho olon'ny finoana eo amin'ny fiainantsika andavan'andro.
Inona àry no mba tianao ataon'Andriamanitra ho tanterahiny eo amin'ny fiainanao ? Mino ve ianao fa hanao izany Izy?
Inona no mba eritreretinao mba tian'Andriamanitra ho tanterahiny eo amin'ny fiainanao? Mahatoky ve ianao fa hanome anao Izy izay ilainao mba hanantanterahina izany?
Ohatran'ireo zanak'Israely teo hoe nomen'Andriamanitra baiko izy fa ho resen'Andriamanitra eo anoloany ireo fahavalo ireo fa tsy ao anatin'ny taona iray fa tsikelikely.
Isika izany tsy tokony zatra manao hoe "eo no ho eo " na "tsy vita androany" tsy maintsy haingana dia haingana fa Andriamanitra dia manana ny fotoanany sy mizaha ny finoantsika hoe tena olona mitoetra sy manaiky ny teniny ve ianao? ary izany no mahatonga an'Andriamanitra mametraka izany fomba fiasa izany.
Inona ny fampanantenan'Andriamanitra izany mba tena tadiavinao amin'izao vanin'andro iainantsika izao?
Aoka isika izany tsy ho tahaka ny olona sasany izay tsy misy zavatra antenaina
Mila manantena foana isika eo amin'Andriamanitra satria izay ilay finoana ary satria isika manana an'Andriamanitra lehibe manana ny zavatra rehetra sy namorona ny zavatra rehetra